Home page – Blog | University of Veterinary Science, Yezin
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၂-၈-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် မွေးမြူရ...
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ရုံးသုံးပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂပစ္စည်း၊ ထရန်စဖော်မာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း န...
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးခွင့်ပြုငွေဖြင့် သဇင်ငြိမ်းကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော (၁၈၀́ x ၄၉́ x ၂၄́) RC နှစ်ထပ် e-Lib...
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်သားများခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (ရေဆင်း၊နေပြည်တော်) ၂၀၁၆ -၂၀...
စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေ...
on: June 03, 2022 In: Announcements
on: March 11, 2022 In: Journal
Kyaw et al. 2022_Liver enzyme activities of captive Asian elephants in Nay Pyi Taw area, Myanmar Read more
Aung et al. 2021_Effects of physical forms of diet (dry versus wet) on the performances of breeding sow Read more
Latt et al. 2021_Supplementation of haematinics and UMMB on some haematological values in local goats Read more
Soe et al. 2020_On-farm phenotypic characterization of Shwe Ni and Pyar Zein in Salin and Pakokku Township Read more